Harena an-dranomasina : miditra amin’ny Toekarena manga i Madagasikara | NewsMada
Harena an-dranomasina : miditra amin’ny Toekarena manga i Madagasikara
Avo roa heny amin’ny haben’ny tanety ny fari-dranomasin’i Madagasikara. Voizina ankehitriny ny Toekarena manga, hanomezan-danja ny fitantanana tsara sy maharitra ny fari-dranomasina, hitondra fampandrosoana.
Miaina any amorontsiraka ny 60%-n’ny Malagasy. Nitsangana efa ho roa taona izao ny sekreteram-panjakana miadidy ny ranomasina (Semer), hamolavola ny paikady nasionaly ho an’ny Harinkarena na Toekarena manga. Hatao laharam-pahamehana ny fitantanana tsara rindra ny harena an-dranomasina, ny fampiroboroboana ny fandraharahana ary ny famoronana asa miankina amin’ny ranomasina. Efa nankatoavin’ny fanjakana ny fametrahana sy ny fanatanterahana ity paikady ity.
Efa misy ny sehatra mandroso
Fitambaran’ny fitantanana sy ny fandrindrana ny sehatrasa miankina amin’ny ranomasina ny Harinkarena manga. Tanjona ny hampaharitra ny fitantanana ho lovain-jafy, manaja ny tontolo iainana ary mizara ny tombontsoa amin’ny vahoaka eny ifotony. Ohatra mifanandrify amin’izany ny fiompiana zanga sy ny fambolena lomotra any Toliara, ny fiompiana makamba any Mahajanga sy Nosy Be. Eo koa ny fanorenana ny seranan-tsambon’i Ehoala any Taolagnaro, ny fampiroboroboana ny fizahantany an-dranomasina.
Hotantanina maharitra ireny fihariana efa misy ireny ary hitarina amin’ny sehatrasa hafa ihany koa, hahazoan’ny vahoaka eny ifotony tombontsoa sy hampandroso ny faritra ary ny firenena amin’ny ankapobeny.
Une réponse à "Harena an-dranomasina : miditra amin’ny Toekarena manga i Madagasikara"
Flavien Jean-JacquesJaovelo 07/11/2017 à 15:12
Quelle couleur politique,C’est naturel